I-WOWOW Replacement Sprayer Head Yekhishi ifenisha ye-G1 / 2 Isixhumi Sabesilisa
Ikhaya / izesekeli / Izesekeli zefenisi / I-WOWOW Esikhundleni se-Sprayer Head Yekhompiyutha Yekhishi Ye-G1 / 2 Isixhumi Sesilisa
Ama-Amazon US I-Amazon CA I-Amazon MX
Qaphela ngaphambi kokuthenga: KUPHELA Isixhumi se-G1 / 2 (MALE) (Cishe u-2 cm noma u-0.8 amayintshi), Hhayi i-NPT, Hhayi indawo yonke
Izinhloko zokusebenza ezintathu zokufafaza: Intuthu / Isifutho / I-Aquablade; Sakaza ukugcwalisa amanzi, fafaza ukugeza okuqinile, amanzi asemanzini okususa imfucumfucu yokudla
Ikhwalithi Ethembekile: Iplastiki yebanga lobunjiniyela (i-ABS) eyakhiwe nomkhakha ohola phambili wokuqinisekisa izimboni, ukuqinisekisa ikhwalithi, ukumelana nokuklwebheka nokugqwala
Kulula ukuhlanza nokufaka: I-aerator yekhwalithi ye-ABS ingavulwa kalula ngohlamvu lwemali, awekho amanzi anzima nesikali, igcina izinga lokuphila nelamanzi lisetshenziswa. Udinga nje ukukhipha eyokuqala bese uyishintsha ufake entsha
Iwaranti, ukwesekwa kwamakhasimende: Kunikezwa iwaranti yeminyaka emibili nokuxhaswa kwamakhasimende ngesikhathi esifanele. Imbozwe yimbuyiselo elinganiselwe yezinsuku ezingama-2. Zizwe ukhululekile ukuxhumana nathi uma unemibuzo
Kwethulwa isipelingi esihlakaniphile, i-H5003 entsha efakwe esikhundleni sokufaka i-H1.5 eklanyelwe ukufaka kalula kufenisha yakho ekhishini yamanje. Inesakhiwo esimnandi se-ergonomic ngezindlela ezimbili zokonga amanzi ezisongela indawo eyi-XNUMX gpm yama-sprouts abanzi nokugeleza.
Phawula ngaphambi kokuthenga: lokhu kufakwa kwekhanda ekhishini kufakwe isixhumi se-g1 / 2 (owesilisa) (cishe 2 cm noma amasentimitha angama-0.8), hhayi i-npt, hhayi indawo esezingeni eliphezulu: ikhanda lokufafaza ekhishini lakhiwe kusuka kupulasitiki yobunjiniyela (i-abs) futhi i-neoperl aerator eqoqiwe, ingasetshenziswa isikhathi eside kakhulu ngesikhathi sokusetshenziswa kwansuku zonke, isiphetho se-nickel esine-anti-rust asilona ukugqwala ngaphandle kokugcinwa kweminwe.
Isitayela senhloso engu-3: ukugeleza kwamanzi okuqhubekayo kunikeza ukugeleza okushelelayo nokunomusa, akukho chaphaza; amanzi okufafaza angageza izithelo noma imifino ngomnene, umfudlana wokulwa ne-splatter ongenamonakalo; isitayela samanzi se-aqua blade / isitayela se-blade singashanela usinki wakho ngokushesha nangokushesha ngamandla amakhulu.
Ukuhlanzwa okulula: i-aerator esezingeni eliphakeme ingahle ihlulwe kalula ngohlamvu lwemali, akukho manzi anzima nesikali, kugcina amanzi nokuphila kujwayelekile
Isiqinisekiso, insizakalo yamakhasimende: Isiqinisekiso seminyaka emi-2 kanye nensizakalo yamakhasimende kungatholakala. Ihlanganiswe ngokubuyiselwa kwezinsuku ezingama-90.
I-SKU: H5003 Categories: Izesekeli zefenisi, izesekeli Tags: I-Nickel ehlutshiwe, Futha uNozzle, Isifutho se-Hose, Insimbi engagqwali
I-WOWOW Faucet Isixhumi se-Hose Owesifazane
I-WOWOW Brunch Nickel Handle ye-Pot Filler Faucet
I-WOWOW Kitchen Splacement Spray Head Brushe ...
I-Wessow Bathroom faucet Vessel Vanity Sink Pop Up ...